FHTDTK-တစ်ဦးကလူပျိုဗိုင်းလိပ်တံလူပျိုထိန်းချုပ်ရေး Hanks စေရန် Cone ဓာတု Fiber ချည်ခင် Winder စက် - တရုတ် FHTDTK-တစ်ဦးကလူပျိုဗိုင်းလိပ်တံလူပျိုထိန်းချုပ်ရေး Hanks စေရန် Cone ဓာတု Fiber ချည်ခင် Winder စက်ပေးသွင်း,စက်ရုံ -FEIHU
E-mail ကို: [email protected] ဖုန်းနံပါတ်: 86-138 6759 9168
စက်အကွေ့အကောက်များသော COLOR ကဒ်
Hanks စက်အကွေ့အကောက်များသော Cone မှ
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် >ကုန်ပစ္စည်း >ချည်ခင်အကွေ့အကောက်များသော machine >Hanks စက်အကွေ့အကောက်များသော Cone မှ
စက်အကွေ့အကောက်များသော Cone မှ Cone
စက်အကွေ့အကောက်များသော soft gooved စည်ကြိုး
စက်အကွေ့အကောက်များသောတင်းကျပ်စွာ gooved စည်ကြိုး
FHTDTK-တစ်ဦးကလူပျိုဗိုင်းလိပ်တံလူပျိုထိန်းချုပ်ရေး Hanks စေရန် Cone ဓာတု Fiber ချည်ခင် Winder စက်
winder စက်ချည်ခင်ကန်တော့ချွန်အကွေ့အကောက်များသောစက်ဇာထိုးဘို့ကောင်းသောကြိုးကန်တော့ချွန်ပုံသဏ္ဍာန်လေအသုံးပြုသည် Cone မှ Hanks,warping, ယက်လုပ်ခြင်း, ဆေးဆိုး,အရောင်ချွတ်,စသည်တို့ကို. ဒါဟာဝါဂွမ်းချည်အဘို့သင့်လျော်သည်,သိုးမွှေးကြိုး,polyester ကြိုး,စက်အကွေ့အကောက်များသော etc.CNC လူပျိုဗိုင်းလိပ်တံလူပျိုထိန်းချုပ်ရေး Hanks စေရန် Cone လဲမှို့နိုင်လွန်သိုးမွှေး
မေးမြန်း ခြင်းတောင်းမှ Add
CNC လူပျိုဗိုင်းလိပ်တံလူပျိုထိန်းချုပ်ရေး Hanks စေရန် Cone လဲမှို့နိုင်လွန်အကွေ့အကောက်များသောစက်
အဆိုပါမော်ဒယ်ဓာတုဖိုင်ဘာများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်, ကြိုး, ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်ရှုပ်ထွေးဆလင်ဒါပိုက်အဖြစ်ကြိုး skein, ပြည်နယ်. ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားအတူစက်တွေအဖြစ်; တစ်ဦးချင်းစီဗိုင်းလိပ်တံထိန်းချုပ်မှု; ရေနံအလိုအလျှောက်ပေါ်လာ; အစွန်း device ကို; ဆန့်ကျင်- -စုပုံထား; ချိုးကြိုး၏ Auto-မှတ်တိုင်; Fixed-အရှည်ထိန်းချုပ်မှု; စူပါ feed ကိုဝါယာကြိုး; ချိန်ညှိတွေနဲ့အနှေး -starting; ချည်ခင်မြန်နှုန်းချိန်ညှိဖြစ်ပါသည်; ချည်ခင်တင်းမာမှု-controlled device ကိုများနှင့်အခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာများ, စက်များ၏အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်:
ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: လိုင်းအမြန်နှုန်းကိုဖြတ်ပြီး; တစ်ဦးကတစ်ဦး -off ပုံစံ; ပင်တင်းမာမှု; ဖွဲ့စည်းလှပသော.
ကုန်ပစ္စည်း နာမတျောကို ကွန်ပျူတာ Hanks ရန် Cone Winder စက်ယန္တရား
ဂဏန်း ၏ ဗိုင်းလိပ်တံ 24(4 ဗိုင်းလိပ်တံသို့မဟုတ်6ဗိုင်းလိပ်တံ / အုပ်စုတစ်စု)
ဗိုင်းလိပ်တံ စံအတိုင်းအတာ 360မီလီမီတာ
စီမန်ကိန်း တခုတည်းသော ဘက်
စွမ်းအား ပေးသွင်း 380V ကို / 220V 50HZ / 60HZ 3phase / 1phase
ဗိုင်းလိပ်တံ စွမ်းအား 120w
Max.yarn အချင်း ≤220မီလီမီတာ
ပှတျတိုကျခွငျး roller သတ်မှတ်ချက် ပြားသော bobbin Φ 80mm×220မီလီမီတာ
သို့မဟုတ် ကန်တော့ချွန် Φ 80mm×220မီလီမီတာ taper 3.5°
အော်တို ရပ် စက်ကိရိယာ motion အာရုံခံကိရိယာ
အီလက်ထရောနစ် anti-Stack အင်ဗာတာ ထိန်းချုပ်မှု
auto-လဆန်း စက်ကိရိယာ optional
သန့်ရှင်းရေး စက်ကိရိယာ optional
အီလက်ထရောနစ် ချည်ခင် ရှင်းလင်း optional
လေ Splicer optional
မှုတ်တံ သန့်ရှင်းရေး optional
အလင်းရောင် စံနစ် optional ကို
ရှုထောင့် L ကို 1454 x W က 690&nx ကsp;x H ကို 1700 မီလီမီတာ (6ဗိုင်းလိပ်တံ)
အလေးချိန် 205ကီလိုဂရမ် / အုပ်စုတစ်စု
လွန်ခဲ့သော : အလိုအလျောက်စည် Hanks စေရန် Cone ချည်ခင်စက်အကွေ့အကောက်များသော
နောက်တစ်ခု : စက်အကွေ့အကောက်များသော HIGH SPPED ဗိုင်းလိပ်တံ CNC ချည်ခင်
ပေါင်း: No.159 Sandu လမ်း, Taozhu လမ်း, Zhuji မြို့, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်နိုင်ငံ.
ညာဘက် copy © 2019 Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. , LTD မှ